အဖေ့ ဝဋ်တွေ လည်နေပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းကို အခု ကြုံနေရတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကာ ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – အောငျနိုငျသူ
Aung Naing Thu | February 9, 2021 | Celebrity | No Comments
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ပိုင်ဖြိုးသုဟာ လတ်တလော မှာတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ အတူ တစ်သား တည်းရှိပြီး အားတတ် သရော ပါဝင် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ဦးပါနော်။သုသုကတော့ သူမရဲ့ လူမူကွန်ယက် စာမျက်နှာထက်မှာ
အဖေ့ ဝဋ်တွေလည်ပြီ ။ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က ညဘက်ဆို လိုင်းတွေတဂျစ်ဂျစ်မြည် နေတဲ့ ရေဒီယိုလေးရှေ့မှာ အဖေထိုင်ပြီး နားစိုက်နားထောင်နေတဲ့ အချိန်ဆို ကျွန်မတို့ညီအစ်မသုံးယောက်ဆော့နေတာတွေ အားလုံးရပ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးနေရတယ်။
အဲဒီ့အချိန်ဆိုစကားလည်းမပြောရဘူး။အော်ပြီးလည်းမရယ်ရဘူး။ခုန်ပေါက်ပြီးတော့လည်းမဆော့ရဘူး။ အဖေကအဲဒီ့ရေဒီယိုလေးရှေ့မှာနားထောင်ရင်း တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ဒေါသတွေထွက်နေတတ်တယ်….
Facebookဆိုတာကြီးရဲ့newsfeedဆိုတာကြီးကိုကြည့်ရင်းတောက်တခေါက်ခေါက်သက်ပြင်းတချချလုပ်မိနေရင်း တစ်ချိန်ကရေဒီယိုလေးရှေ့မှာတောက်ခေါက်နေတတ်တဲ့အဖေ့ကိုပြန်မြင်ယောင်မိတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မသိလိုက်ပြီ
ကျွန်မရဲ့ကလေးလေးကိုကျွန်မရဲ့ဝဋ်တွေဆက်မလည်ရပါပဲနဲ့ တရားမျှတတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ လောကကြီးမှာ ကြီးပြင်းခွင့်ရစေချင်မိတယ် ဆိုတာကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဘံ ဖြစ်ပါတယ်နော်။credit
Unicode…အဖေ့ ဝဋျတှေ လညျနပွေီဆိုတဲ့ အကွောငျးကို အခု ကွုံနရေတာနဲ့ နငျးယဉျကာ ပွောပွလာတဲ့ ပိုငျဖွိုးသု
သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး ပိုငျဖွိုးသုဟာ လတျတလော မာတော့ ပွညျသူတှရေဲ့ ဆန်ဒနဲ့ အတူ တဈသား တညျးရပွီး အားတတျ သရော ပါဝငျ လုပျဆောငျနတေဲ့ အနုပညာရငျ တဈဦးပါနျော။သုသုကတော့ သူမရဲ့ လူမူကှနျယကျ စာမကျြနာထကျမာ
အဖေ့ ဝဋျတှလေညျပွီ ။ကြှနျမတို့ ငယျငယျက ညဘကျဆို လိုငျးတှတေဂဈြဂဈြမွညျ နတေဲ့ ရဒေီယိုလေးရမာ အဖထေိုငျပွီး နားစိုကျနားထောငျနတေဲ့ အခြိနျဆို ကြှနျမတို့ညီအဈမသုံးယောကျဆော့နတောတှေ အားလုံးရပျပွီးငွိမျငွိမျလေးနရေတယျ။
အဲဒီ့အခြိနျဆိုစကားလညျးမပွောရဘူး။အျောပွီးလညျးမရယျရဘူး။ခုနျပေါကျပွီးတော့လညျးမဆော့ရဘူး။ အဖကေအဲဒီ့ရဒေီယိုလေးရမာနားထောငျရငျး တောကျတခေါကျခေါကျနဲ့ဒေါသတှထှေကျနတေတျတယျ….
Facebookဆိုတာကွီးရဲ့newsfeedဆိုတာကွီးကိုကွညျ့ရငျးတောကျတခေါကျခေါကျသကျပွငျးတခခြလြုပျမိနရေငျး တဈခြိနျကရဒေီယိုလေးရမာတောကျခေါကျနတေတျတဲ့အဖကေို့ပွနျမွငျယောငျမိတဲ့အခြိနျမာ ကြှနျမသိလိုကျပွီ
ကြှနျမရဲ့ကလေးလေးကိုကြှနျမရဲ့ဝဋျတှဆေကျမလညျရပါပဲနဲ့ တရားမတြတဲ့ လှတျလပျတဲ့ လောကကွီးမာ ကွီးပွငျးခှငျ့ရစခေငျြမိတယျ ဆိုတာကို ရေးသားဖျောပွခဲ့တာဘံ ဖွဈပါတယျနျော။credit
ဆုတောင်းစကားတစ်ခု ဆိုလိုက်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေကြား ဝေဖန်မှုတွေ မြင့်တက်နေတဲ့ နေဆန်း
အိမ်ထဲမှာတော့မနေနိုင်ဘူး ထောင်ပဲကျကျ သေပဲ သေသေ ဆိုတဲ့ အလင်းရောင်
ဆောင်းဦးလှိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျားပေါက်ကို ပညာသားပါပါပြောလိုက်တဲ့ မောင်မောင်အေး
ပည်သူတွေ အားမပေးလဲ ထိုင်းဘက်က သူ့ဝင်ငွေတွေသိရင် ရူးသွားလိမ့်မယ်လို့ ပြောလာတဲ့ နေဆန်း